‘पारसको १२ लाख काण्डलाई लिएर सोनिका बानाइन् यस्तो र्याप ब्याटल’ (भिडियोसहित) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/‘पारसको १२ लाख काण्डलाई लिएर सोनिका बानाइन् यस्तो र्याप ब्याटल’ (भिडियोसहित)
पूर्व युवराज पारस शाहसंग नजि’कको सम्बन्ध रहेकी युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकाय यतिबेला लकडाउनको समय सदुप’योग गर्न आफ्नो गृहजिल्ला पुगेकी छन् ।
उनी अहिले बझागं स्थित आफ्नो परि’वारका सदस्यसंग विताएकी छन् । गाउँमा घुमफिर गर्दै विता’एकी उनले आफ्ना बारेमा सामाजि’क सञ्जालमा आएका केही आरोपका बारेमा आफैलार्य ब्यग्य गर्दै आएकी छन् ।
उनलाई पूर्व युवराज पार’सको एटिएमवाट पटक पटक १२ लाख रुपैया झिकेको आ’रोप लागेको थियो । एउटा अन’लाईन प्रोटलमा यसवारे समाचार बनाइ’एपछि अहिले त्यसबीचमा उनको निकै चर्चा भएको हो । उनी लकडा’उनका स’मयमा गृहजिल्ला तिर जाँ’दा एउटा अनलाईन मिडियाले लेखेको सो समाचा’रलाई माध्यम बनाएर थुप्रै सामग्री बनाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उ’छितो काडिरहँदा सोनि’का भने विपन्नलाई सहयोग गर्न गाउँ गाउँ पुगेकी थिइन् । उनलाई पूर्वयु’वराज पारस शाहसंग जोडेर विभिन्न स’माचार बनाइएका हुन् ।
हुन त उनी’हरुको सम्बन्ध’लाई मिडिया’मा चर्चा भइरहन्छ । उनीहरुलाई गसिपको माध्यम बनाइन्छ । तर यस्ता गसिप’वाट उनीहरुले प्रवाह भने गरेको देखिदैन । तर अहि’ले भने फरक कुरा बा’हिर आएपछि पारस र सोनिका दुवैले यसको प्रतिकृया दिएका छन् ।
सोनिकालार्य पटक पटक गरेर पार’सको एटिए’म प्रयोग गरेर ठूलो रुपैया झिकेको दावी सहित समाचार बाहि’रिएको छ । त्यस्तै पूर्व युवराज पारसलाई पोखरामा हा’र्टअट्याक आएको भनेर समाचार बाहिरिएको थियो । त्यो कुरा अहिले भने झुटो सावित भइसकेको छ ।
उनले सो विषयलाई लिएर कडा प्रति’कृया दिएकी छन् । उनले आफ्ना बारेमा अनर्गल प्रचार गर्नेहरुको एक दिन पक्कै वाहिर आउने बताएकी छन् । आफु’लाई यस्तो आरोप लागेपछि उनले आफ्ना गृह’जिल्लामा पुगेर आफ्नै मजाक बनाउँदै र्याप गित बनाइर’हेकी छन् । उनले हरेक भिडियोमा त्यो कुरालाई उठाउने गरेकी छन् ।
कहिले युवालाई भेला पारेर यसवारे विभिन्न भि’डियो सामग्री निर्माण गर्ने गरेकी छन् । उनले आफुलाई लिएर गरिने प्रहार’को वारेमा यसरी ब्यग्य गरेकी छन् ।
भिडियो सार्वज’निक गर्दै उनले अब आउने मिडिया’का हेडलाईनका बारेमा पनि ब्यगंग्य गर्दै भनेकी छन् । १२ लाख लिएर सोनिका बझागं भागेकी सोनिका तनावमा ?
सोनिका अहिले लकडा’उनका कारण समस्यामा परेका’हरुलाई सहयोग गर्दै उनी पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्ला पुगेकी हुन् । उनले दैनिक ज्याला गरेर खानेहरुलाई सहयोग गरिरहेकी छन् ।
पोखरामा विगत केही दिन देखि पार्टी गरिरहे’का पूर्व युवराज पारस पनि पोखराकै केही विपन्न समुदाय’लाई राहत सहयोग गर्दै देखिएका छन् ।
उनले पोखरामा हुँदा सामा’जिक सञ्जालमा लेखे’को एउटा स्टाटसका कारण पनि फेरी एक पटक पारस र सोनिकाको विषय चर्चामा आएको हो । उनीहरु दुई जना निकै नजि’क थिए ।
फेरी उनीहरु अधिकाँश कृयाक’लापमा संगै देखिन्थे । सोनिकाले पूर्वयुवराज पारसको हरेक गतिविधिको भिडियो बनाएर सिलसि’लेवार पोष्ट गर्ने गरेकी थिइन् । भिडियो हेर्नुहोस्….
भाग्य न्यौपाने यो देशको हिरो हो भन्दै डा सुरेन्द्र केसीको कडा जवाफ:भाग्य न्यौपानेकै जस्तो गरेर देखाउ